အင်္ဂါ သားသ္မီး များအတွက် ဘဝ တစ်သက်တာ ယတြာ – Shwewiki.com
အင်္ဂါ သားသ္မီး များအတွက် ဘဝ တစ်သက်တာ ယတြာ
အန္တရာယ်​ ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​
​ခ​ရေညွှန့်​ နှင့်​ ​သ​ပြေညွှန့်​ တို့ကို ဘုရား​ပန်းအိုး တွင်​ ၄င်း တံခါး​ပေါက်​ တွင်​ ၄င်း ထိုးပါ ( ၇ )ရက်​ ၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ​ပေးပါ ။
အိမ်​ ၏ ​တောင်​ အရပ်​ တွင်​ နှင်းဆီပင်​ကို စိုက်​ထားပါ၊ စိုက်​ရမည့်​ နည်းမှာ တွင်း ကို တစ်​​ထောင့်​ထွာ ခန့်​ တူးပြီး ​မြေကြီးထဲ တွင်​
​ကျောက်​​ရောင်​စုံ မျိုးစုံ ( ၇ )မျိုး ဆန်​တစ်​ဆုပ်​ ​မြေဇာမြက်​ တစ်​ဆုပ်​ ​ကြေးနီပိုက်​ဆံ တစ်​ပြား သံ​ချောင်းတစ်​​ချောင်းကို ​ရော၍ ထည့်​ပြီးလျှင်​ သစ်​ပင်​ ကို ​ရွှေရည်​ ​ငွေရည်​ ​လောင်းပါ ။
သစ်​ပင်​စိုက်မည့်​နေ့တွင်​ ဥပုသ်​​စောင့်​ နိုင်​လျှင်​​သော်​၄င်း ၊ သက်​သတ်​လွှတ်​ စားနိုင်​လျှင်​၄င်း ၊ ​ကောင်း၏ ( ထိုနေ့၌ ​မေထုန်​ မှီဝဲခြင်း မပြုရ )
ကိုယ်​စိုက်​တဲ့ သစ်​ပင်​​လေးက အရွက်​ အခက်​များဖြင့်​ရှင်​သန်​လာ​လေ လာဘ်​ရွှင်​​လေဖြစ်​မည်​၊ ၎င်းသစ်​ပင်​ကို တနင်္ဂ​နွေ၊ စ​နေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင်​ စိုက်​ရပါမည်​ ။
ဤယတြာကို အင်​တာဗျူး ခေါ်ပြီး၊ အလုပ်​​လျှောက်​ပြီး၊ စာ​မေးပွဲ ​ဖြေပြီးမှပြုလုပ်​ပါ ​…မျှော်​လင့်​ထားသလို ​အောင်​မြင်​ပါလိမ့်​မည်​ ။
အုန်းရွက်​ပေါ်တွင်​ထိုင်​၍ ထမင်းစားပါ၊ စားပြီးပါက ၎င်းအရွက်ကို ​အ​နောက်​အရပ်​သို့ မိမိ၏ လိုအပ်​​သော အကြံအစည်​ကိုရည်​စူးပြီးစွန့်​ပါ စိတ်​အတွင်းမှ လူကြီးများကို ​မေတ္တာပို့ပြီး စွန့်​ပါ ၉ရက်​ ဆက်​တိုက်​ပြုလုပ်​ပါက ထူးခြား​သော ​အောင်​မြင်​မူရရှိပါလိမ့်​မယ်​ ။
မိမိကို စိတ်​ဆင်းရဲ ကိုယ်​ဆင်းရဲ ဖြစ်​​အောင်​ အ​နှောင့်​အယှက်​အမျိုးမျိုး ရန်​အသွယ်​သွယ်​ ပြု​နေ​သောသူများကို မိမိ၏ရန်​သူအဖြစ်​မှ မိတ်​​ဆွေအဖြစ်​ ဖြစ်​လာ​စေရန်​ ​အောက်​ပါအတိုင်း ​ဆောင်​ရွက်​ပါ ။
မိမိရဲ့သန့်​ရှင်း​သောအဝတ်​စတစ်​ခုကို ဇီးပင်​တွင်​ချည်​ပြီး ​မကျည်းကိုင်းဖြင့်​ အသက်​​အောင့်​ကာ ( ၉ ) ချက်​ ရိုက်​ပါ ။
အနဲဆုံး ( ၃ ) ကြိမ်​လုပ်​ရပါမယ်​ မိမိတို့ အ​နေဖြင့်​ ဆက်​လက်​လုပ်​ကိုင်​​ပါက ပို​ကောင်းပါတယ်​ ….
( ၉ ) ရက်​ မှ ( ၂၁ )ရက်​အတွင်း ရန်​များ ​ပြေ​ပျောက်​ပြီး ပြန်​လည်​ အဆင်​​ပြေလာပါမည်​ ။
ရန်​သူကို မေတ္တာပို့ပြီး ​အောင်​မြင်​ရန်​အတွက်​
ကိုယ့်​မှာအမူအခင်း တစ်​စုံတစ်​ရာ ဖြစ်​​စေ၊ သူတစ်​ပါးက ကိုယ့်​ကိုမလိုမုန်းထားကာ အ​နှောင့်​အယှက်​ ​ပေး​နေတာ ကြုံ​နေရပါက….
အ​ရှေ့ဘက်​အရပ်​ ကို မျက်​နှာမူကာ ​ဖက်​သန်းရွက်​​​ပေါ် ထိုင်​ပြီး ( ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သဃာံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ) ဟူ၍ သရဏဂုံဂါထာကို ၉ရက်​တိုင်​တိုင်​ ​နေ့စဉ်​ ၉ပတ်​စီ ပုတီးစိပ်​ပါ ။
ပုတီး စိပ်​​ပြီးသောအခါ မိမိ၏ စိတ်​အာရုံ မှာ မိမိကိုသောက ​ပေးသူ၏ မျက်​နှာကို စိတ်​ထဲပြဿနာ မဖြစ်​ကြခင်​က မျက်​နှာထားကို ပုံ​ဖော်​ပြီး မြင်​​ယောင်​ကာ ​မေတ္တာပို့ပါ ။
၉ရက်​ တိုင်​တိုင်​ ​နေ့စဉ်​ ၉ပတ်​ စီ စိပ်​ပြီးပါက ထိုသူနှင့်​ ​တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပါ ။ ကိုယ့်​အ​ပေါ် နားလည်​မူ​ပေးကာ ​မေတ္တာ ဖြင့်​ ပြန်​လည်​ဆက်​ဆံတာ ကြုံရပါမယ်​ ။
ကြိုက်​တဲ့ယတြာပဲလုပ်​လုပ်​ စာမကျက်​ပဲ စာမလုပ်​ပဲ မ​အောင်​မြင်​မှာ ကိုသတိပြုပါ၊ ခု​ပြောပြမယ့်​ နည်း​လေးက ဥုံဖွ ​အောင်​ဟ ဆိုပြီး လုပ်​လို့ ရမယ့်​နည်း မဟုတ်​ပါ ။
စာကျက်​ရင်း ဖတ်​မှတ်​ရင်း ​ရှေ့ကစာ​မေ့ ​နောက်​ကစာကျန်​/ခုရပြီး ​ခဏ​နေ ပြန်​ပြီး ဖတ်​ချိန်​​မေ့ကုန်​တာ၊ စာ​တွေ ရှန်းပြီး ဟိုကကျန်​၊ ဒီက ချန်​ စတာ​တွေ ဖြစ်​တတ်​သူ​တွေအတွက်​ မှတ်​ဥာဏ်​ စွမ်းအား မြှင့်​လာ​စေဖို့ လုပ်​တဲ့သ​ဘောဖြစ်​ပါတယ်​ ။
စာကျက်​တဲ့ အခါတိုင်း တောင်​အရပ်​ကို မျက်​နှာ မပြုပါနဲ့ ၊ စာကျက်​ခါနီး သူရဿတီမယ်​​တော်​ကို အာရုံပြု ပြီးမှ ​မေတ္တာပို့ပြီးကျက်​မှတ်​ပါ ….
စာကျက်​​နေတဲ့စားပွဲ ကုလားထိုင်​( ​သို့ ) ထိုင်​ခင်းစတဲ့ အောက်​မှာသရက်​ရွက်​ကို ကပ်​ထား ​ပေးပါ၊ မြေ​ပေါ်ထိုင်​ကျက်​ပါက မိမိ၏လက်​ရှိ ကျက်​မှတ်​မယ့်​ စာအုပ်​ကြားထဲညှပ်​ထားပြီး ကျက်​ပါ ။
ဖတ်​သမျှစာ ​ခေါင်းထဲစွဲကျန်​ပြီး ​နောင်​ကိုမ​မေ့​တော့ပဲ မှတ်​ဥာဏ်​များ ပွင့်​လန်းကာ ပညာ​ရေးအဆင်​​ပြေလာပါမယ်​။
ကိုယ်​လုပ်​​နေတဲ့ အလုပ်​မှာ အထက်​လူကြီးကို တစ်​စုံတစ်​ရာ ပြောရမှာ ခက်​ခဲ​နေရင်​၄င်း၊ ​လုပ်​ငန်းတွင်းဆွေး​နွေး တိုင်​ပင်​မူများတွင် ​မိမိစကား အ​ရေးတယူ ပြု​ပေး ​စေလိုက၄င်း….
စိတ်​မချရ​သော အောက်​လက်​ငယ်​သား ကိုကိုယ့်​ စကားတည်​​စေရန်​ ၄င်း ၊ လုပ်​​နေတဲ့အလုပ်​ထဲက မိတ်​​ဆွေများနဲ့ စကား​ပြောရင်​ အဆင်​​ပြေရန်​၄င်း ၊ ​အောက်​ပါအတိုင်း​ဆောင်​ရွက်​ပါ ။
ကိုယ့်​အလုပ်​စားပွဲက ကုလားထိုင်​ ​အောက်​မှာ ထန်း နဲ့ အုန်း ရွက်​ လက်​တစ်​ဆစ်​ စီကပ်​ထားပါ၊ ၄င်း အရွက်​ ကို မိမိ ၏ ဖိနပ်​မှာ ကပ်​ထားပြီး စီးပါကလည်း ရပါတယ်​ ။
ကုလားထိုင်​နဲ့ ​ဖိနပ်​အောက်​မှာ ထားရန်​ အဆင်​မ​ပြေက မိမိကိုယ်​မှာအမြဲ ​ဆောင်​ထားနိုင်​ပါတယ်​ ။
ကိုယ့်​မှာရန်​အတိုက်​အခိုက်​ အ​နှောင့်​အယှက်​ အမြဲကင်းပြီး အဆင်​​ပြေ​စေဖို့ အ​ဆောင်​အဖြစ်​ ​ဆောင်​ထားလိုပါက…
​ဖက်​သန်းမြစ်​ကို ခြ​င်္သေ့ရုပ်​ထုပြီး သန့်​ရှင်းစင်​ကြယ်​တဲ့ ​ရေမှာစိမ်​ကာ ဂုဏ်​​တော်​ကိုးပါးပုတီး ၁၀ ပတ်​စိပ်​ပြီး အန္တရာယ်​ကင်း ဆု​တောင်း​ကာ၎င်း အရုပ်​က​လေးကို​ဆောင်​ထားပါ ။
ကိုယ်​ ရောင်းချင်​တဲ့ ပစ္စည်း​လေးခပ်​မြန်​မြန်​ ​ရောင်းထွက်​​အောင်​ ၊ အ​ရောင်းထိုင်း​နေရင်​ မထွက်​ရင်​​ရောင်းပန်းလှ​အောင်​ ​အောက်​ပါအတိုင်းပြုလုပ်​​ပေးပါ ။
​ရောင်းလို​သော ကုန်​ပစ္စည်းကို ဇီးကိုင်း( သို့ ) ဇွန်​ကိုင်းဖြင့်​ အသက်​​အောင့်​ကာ နှုတ်​ဖျားမှ ထွက်​ ထွက်​ ဟု ရွတ်​ပြီး ၇ချက်​ ရိုက်​ပါ ။
ထိုသို့ မကြာခဏ လုပ်​​ပေးပါက အမြန်​ဆုံး၂၁ရက်​ ၊ အကြာဆုံး ၄၅ရက်​ အတွင်းမှာ ​ရောင်းထွက်​သွားပါမယ်​ ။
​ဆေးဝါးကုသမူနဲ့ ကိုယ်​တလွဲ​တွေ ဖြစ်​​နေရင်​၊ ​ဆေးမစူး ​၊ ဆေးမတိုးရင်​ ​၊ နေ​ထိုင်​မ​ကောင်းတာ ရက်​ရှည်​လများ ဖြစ်​​နေရင်​ ​အောက်​ပါအတိုင်း ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ။
ကိုယ့်​ရဲ့ အိပ်​ယာ​အောက်​မှာ အုန်းရွက်​နဲ့ ​ဇီးရွက်​အနည်းငယ်​စီခင်းအိပ်​ ထားကာ မနက်​မှာ အိမ်​ ရဲ့ တောင်​အရပ်​မှာ ၄င်းတို့ကို စွန့်​ပါ မကြာခဏလုပ်​ပါ ။
​ရောဂါ​ဝေဒနာ အကြီးများ ခံစား​နေရပါက ဆန်​ ၉ဆုပ်​ကို အိပ်​ယာ ​ခေါင်းရင်းမှာထား အိပ်​ပါ ။ မနက်​တွင်​ ကုန်းသတ္တဝါ ၊​ရေသတ္တဝါ များကို​ကျွေးပါ ။ သုံးကြိမ်​ ပြုလုပ်​ရပါမယ်​ ။
​ဖက်​သန်းမြစ်​ ဖြင့်​ ခြ​င်္သေ့ရုပ်​ ၃ရုပ်​ထုကာ တစ်​ရုပ်​ကို ဘုရားစင်​ ၊ တစ်​ရုပ်​ကို ​ငွေထား​တဲ့ နေရာ ၊ တစ်​ရုပ်​ကို ကိုယ့်​ဆိုင်​၏ တံခါး​ပေါက်​ ပေါ်မှာ ထားပါ ။ကိုယ့်အလုပ်​စားပွဲ ညာဘက်​ အံဆွဲမှာ ထားပြီးလည်း ​ဆောင်​နိုင်​ပါတယ်​ ။
အ​ရေးကြီး​သော စကားများ ​ပြောဆိုစရာ​တွေ ရှိပါက ထိုအရုပ်​​လေး ​ဆောင်​၍ ​ပြောဆိုပါက မိမိအကျိုး ရှိ​စေ​သော ကိစ္စများ ဖြစ်​လာပါမည်​ ။အထူး လာဘ်​လာဘ ရွှင်​လာပါမယ်​ ။
မိတ်​​ဆွေတို့ ဖတ်ပြီး သ​ဘောကျ နှစ်​သက်​ရင်​ မိမိတို့ မိတ်​​ဆွေများကိုလည်း ပြန်လည် ​ဝေမျှ ပေးကြပါဦးခင်​ဗျာ…..။(လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)​ဝေဒင်္ဂ
အင်ျဂါသားသ်မီး မြားအတှကျ ဘဝတဈသကျတာ ယတွာ
ခရညှေနျ့ နှငျ့ သပွညှေနျ့ တို့ကို ဘုရားပနျးအိုး တှငျ ၎င်းငျး တံခါးပေါကျ တှငျ ၎င်းငျး ထိုးပါ ( ၇ )ရကျ ၁ကွိမျ ရလေဲ ပေးပါ ။
အိမျ ၏ တောငျ အရပျ တှငျ နှငျးဆီပငျကို စိုကျထားပါ၊ စိုကျရမညျ့ နညျးမှာ တှငျး ကို တဈထောငျ့ထှာ ခနျ့ တူးပွီး မွကွေီးထဲ တှငျ
ကြောကျရောငျစုံ မြိုးစုံ ( ၇ )မြိုး ဆနျတဈဆုပျ မွဇောမွကျ တဈဆုပျ ကွေးနီပိုကျဆံ တဈပွား သံခြောငျးတဈခြောငျးကို ရော၍ ထညျ့ပွီးလြှငျ သဈပငျ ကို ရှရေညျ ငှရေညျ လောငျးပါ ။
သဈပငျစိုကျမညျ့နတှေ့ငျ ဥပုသျစောငျ့ နိုငျလြှငျသျော၎င်းငျး ၊ သကျသတျလှတျ စားနိုငျလြှငျ၎င်းငျး ၊ ကောငျး၏ ( ထိုနေ့၌ မထေုနျ မှီဝဲခွငျး မပွုရ )
ကိုယျစိုကျတဲ့ သဈပငျလေးက အရှကျ အခကျမြားဖွငျ့ရှငျသနျလာလေ လာဘျရှငျလဖွေဈမညျ၊ ၎င်းငျးသဈပငျကို တနင်ျဂနှေ၊ စနေ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနမြေ့ားတှငျ စိုကျရပါမညျ ။
ဤယတွာကို အငျတာဗြူး ချေါပွီး၊ အလုပျလြှောကျပွီး၊ စာမေးပှဲ ဖွပွေီးမှပွုလုပျပါ …မြှျောလငျ့ထားသလို အောငျမွငျပါလိမျ့မညျ ။
အုနျးရှကျပျေါတှငျထိုငျ၍ ထမငျးစားပါ၊ စားပွီးပါက ၎င်းငျးအရှကျကို အနောကျအရပျသို့ မိမိ၏ လိုအပျသော အကွံအစညျကိုရညျစူးပွီးစှနျ့ပါ စိတျအတှငျးမှ လူကွီးမြားကို မတ်ေတာပို့ပွီး စှနျ့ပါ ၉ရကျ ဆကျတိုကျပွုလုပျပါက ထူးခွားသော အောငျမွငျမူရရှိပါလိမျ့မယျ ။
မိမိကို စိတျဆငျးရဲ ကိုယျဆငျးရဲ ဖွဈအောငျ အနှောငျ့အယှကျအမြိုးမြိုး ရနျအသှယျသှယျ ပွုနသေောသူမြားကို မိမိ၏ရနျသူအဖွဈမှ မိတျဆှအေဖွဈ ဖွဈလာစရေနျ အောကျပါအတိုငျး ဆောငျရှကျပါ ။
မိမိရဲ့သနျ့ရှငျးသောအဝတျစတဈခုကို ဇီးပငျတှငျခညျြပွီး မကညျြးကိုငျးဖွငျ့ အသကျအောငျ့ကာ ( ၉ ) ခကျြ ရိုကျပါ ။
အနဲဆုံး ( ၃ ) ကွိမျလုပျရပါမယျ မိမိတို့ အနဖွေငျ့ ဆကျလကျလုပျကိုငျပါက ပိုကောငျးပါတယျ ….
( ၉ ) ရကျ မှ ( ၂၁ )ရကျအတှငျး ရနျမြား ပွပြေောကျပွီး ပွနျလညျ အဆငျပွလောပါမညျ ။
ရနျသူကို မတ်ေတာပို့ပွီး အောငျမွငျရနျအတှကျ
ကိုယျ့မှာအမူအခငျး တဈစုံတဈရာ ဖွဈစေ၊ သူတဈပါးက ကိုယျ့ကိုမလိုမုနျးထားကာ အနှောငျ့အယှကျ ပေးနတော ကွုံနရေပါက….
အရှဘေ့ကျအရပျ ကို မကျြနှာမူကာ ဖကျသနျးရှကျပျေါ ထိုငျပွီး ( ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဓမ်မံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ သဃာံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ ) ဟူ၍ သရဏဂုံဂါထာကို ၉ရကျတိုငျတိုငျ နစေ့ဉျ ၉ပတျစီ ပုတီးစိပျပါ ။
ပုတီး စိပျပွီးသောအခါ မိမိ၏ စိတျအာရုံ မှာ မိမိကိုသောက ပေးသူ၏ မကျြနှာကို စိတျထဲပွဿနာ မဖွဈကွခငျက မကျြနှာထားကို ပုံဖျောပွီး မွငျယောငျကာ မတ်ေတာပို့ပါ
၉ရကျ တိုငျတိုငျ နစေ့ဉျ ၉ပတျ စီ စိပျပွီးပါက ထိုသူနှငျ့ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျးပါ ။ ကိုယျ့အပျေါ နားလညျမူပေးကာ မတ်ေတာ ဖွငျ့ ပွနျလညျဆကျဆံတာ ကွုံရပါမယျ ။
ကွိုကျတဲ့ယတွာပဲလုပျလုပျ စာမကကျြပဲ စာမလုပျပဲ မအောငျမွငျမှာ ကိုသတိပွုပါ၊ ခုပွောပွမယျ့ နညျးလေးက ဥုံဖှ အောငျဟ ဆိုပွီး လုပျလို့ ရမယျ့နညျး မဟုတျပါ ။
စာကကျြရငျး ဖတျမှတျရငျး ရှကေ့စာမေ့ နောကျကစာကနျြ/ခုရပွီး ခဏနေ ပွနျပွီး ဖတျခြိနျမကေု့နျတာ၊ စာတှေ ရှနျးပွီး ဟိုကကနျြ၊ ဒီက ခနျြ စတာတှေ ဖွဈတတျသူတှအေတှကျ မှတျဉာဏျ စှမျးအား မွှငျ့လာစဖေို့ လုပျတဲ့သဘောဖွဈပါတယျ ။
စာကကျြတဲ့ အခါတိုငျး တောငျအရပျကို မကျြနှာ မပွုပါနဲ့ ၊ စာကကျြခါနီး သူရဿတီမယျတျောကို အာရုံပွု ပွီးမှ မတ်ေတာပို့ပွီးကကျြမှတျပါ ….
စာကကျြနတေဲ့စားပှဲ ကုလားထိုငျ( သို့ ) ထိုငျခငျးစတဲ့ အောကျမှာသရကျရှကျကို ကပျထား ပေးပါ၊ မွပေျေါထိုငျကကျြပါက မိမိ၏လကျရှိ ကကျြမှတျမယျ့ စာအုပျကွားထဲညှပျထားပွီး ကကျြပါ ။
ဖတျသမြှစာ ခေါငျးထဲစှဲကနျြပွီး နောငျကိုမမတေ့ော့ပဲ မှတျဉာဏျမြား ပှငျ့လနျးကာ ပညာရေးအဆငျပွလောပါမယျ။
ကိုယျလုပျနတေဲ့ အလုပျမှာ အထကျလူကွီးကို တဈစုံတဈရာ ပွောရမှာ ခကျခဲနရေငျ၎င်းငျး၊ လုပျငနျးတှငျးဆှေးနှေး တိုငျပငျမူမြားတှငျ မိမိစကား အရေးတယူ ပွုပေး စလေိုက၎င်းငျး….
စိတျမခရြသော အောကျလကျငယျသား ကိုကိုယျ့ စကားတညျစရေနျ ၎င်းငျး ၊ လုပျနတေဲ့အလုပျထဲက မိတျဆှမြေားနဲ့ စကားပွောရငျ အဆငျပွရေနျ၎င်းငျး ၊ အောကျပါအတိုငျးဆောငျရှကျပါ ။
ကိုယျ့အလုပျစားပှဲက ကုလားထိုငျ အောကျမှာ ထနျး နဲ့ အုနျး ရှကျ လကျတဈဆဈ စီကပျထားပါ၊ ၎င်းငျး အရှကျ ကို မိမိ ၏ ဖိနပျမှာ ကပျထားပွီး စီးပါကလညျး ရပါတယျ ။
ကုလားထိုငျနဲ့ ဖိနပျအောကျမှာ ထားရနျ အဆငျမပွကေ မိမိကိုယျမှာအမွဲ ဆောငျထားနိုငျပါတယျ ။
ကိုယျ့မှာရနျအတိုကျအခိုကျ အနှောငျ့အယှကျ အမွဲကငျးပွီး အဆငျပွစေဖေို့ အဆောငျအဖွဈ ဆောငျထားလိုပါက…
ဖကျသနျးမွဈကို ခွင်ျသရေု့ပျထုပွီး သနျ့ရှငျးစငျကွယျတဲ့ ရမှောစိမျကာ ဂုဏျတျောကိုးပါးပုတီး ၁၀ ပတျစိပျပွီး အန်တရာယျကငျး ဆုတောငျးကာ၎င်းငျး အရုပျကလေးကိုဆောငျထားပါ
ကိုယျ ရောငျးခငျြတဲ့ ပစ်စညျးလေးခပျမွနျမွနျ ရောငျးထှကျအောငျ ၊ အရောငျးထိုငျးနရေငျ မထှကျရငျရောငျးပနျးလှအောငျ အောကျပါအတိုငျးပွုလုပျပေးပါ ။
ရောငျးလိုသော ကုနျပစ်စညျးကို ဇီးကိုငျး( သို့ ) ဇှနျကိုငျးဖွငျ့ အသကျအောငျ့ကာ နှုတျဖြားမှ ထှကျ ထှကျ ဟု ရှတျပွီး ၇ခကျြ ရိုကျပါ ။
ထိုသို့ မကွာခဏ လုပျပေးပါက အမွနျဆုံး၂၁ရကျ ၊ အကွာဆုံး ၄၅ရကျ အတှငျးမှာ ရောငျးထှကျသှားပါမယျ ။
ဆေးဝါးကုသမူနဲ့ ကိုယျတလှဲတှေ ဖွဈနရေငျ၊ ဆေးမစူး ၊ ဆေးမတိုးရငျ ၊ နထေိုငျမကောငျးတာ ရကျရှညျလမြား ဖွဈနရေငျ အောကျပါအတိုငျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ ။
ကိုယျ့ရဲ့ အိပျယာအောကျမှာ အုနျးရှကျနဲ့ ဇီးရှကျအနညျးငယျစီခငျးအိပျ ထားကာ မနကျမှာ အိမျ ရဲ့ တောငျအရပျမှာ ၎င်းငျးတို့ကို စှနျ့ပါ မကွာခဏလုပျပါ ။
ရောဂါဝဒေနာ အကွီးမြား ခံစားနရေပါက ဆနျ ၉ဆုပျကို အိပျယာ ခေါငျးရငျးမှာထား အိပျပါ ။ မနကျတှငျ ကုနျးသတ်တဝါ ၊ရသေတ်တဝါ မြားကိုကြှေးပါ ။ သုံးကွိမျ ပွုလုပျရပါမယျ
ဖကျသနျးမွဈ ဖွငျ့ ခွင်ျသရေု့ပျ ၃ရုပျထုကာ တဈရုပျကို ဘုရားစငျ ၊ တဈရုပျကို ငှထေားတဲ့ နရော ၊ တဈရုပျကို ကိုယျ့ဆိုငျ၏ တံခါးပေါကျ ပျေါမှာ ထားပါ ။ကိုယျ့အလုပျစားပှဲ ညာဘကျ အံဆှဲမှာ ထားပွီးလညျး ဆောငျနိုငျပါတယျ ။
အရေးကွီးသော စကားမြား ပွောဆိုစရာတှေ ရှိပါက ထိုအရုပျလေး ဆောငျ၍ ပွောဆိုပါက မိမိအကြိုး ရှိစသေော ကိစ်စမြား ဖွဈလာပါမညျ ။အထူး လာဘျလာဘ ရှငျလာပါမယျ ။
မိတျဆှတေို့ ဖတျပွီး သဘောကြ နှဈသကျရငျ မိမိတို့ မိတျဆှမြေားကိုလညျး ပွနျလညျ ဝမြှေ ပေးကွပါဦးခငျဗြာ…..။(လေးစားမှုဖွငျ့ ခရကျဒဈ)ဝဒေင်ျဂ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သံသ ယလူနာအမျိုးသမီး လပွတ္တာမြို့နယ်တွ င် ၁ ဦးတွေ့ရှိ
သင် ရဲ့ နာမည် မှာ ”M” ပါ ခဲ့သော်